I-EA015 - I-OMG Wireless Chair Pad Phuma kuma-Alamu Ekhaya (Ukuvimbela Ukuwa Kwabantu Abadala) - $ 380 - Izixazululo ze-OMG
I-EA015 - I-OMG Wireless Chair Pad Phuma kuma-Alamu Ekhaya (Ukuvimbela Ukuwa Kwabantu Abadala) - $ 380
Ukunciphisa CordLess® Fall Monitor ngaphandle Cords
Akukho umsindo endaweni! Faka i-Monitor Quiet Fall lapho udinga khona
Ukuqeda umsindo wesikamelo - Ukuvimbela Ukuvimbela Ukunciphisa.
I-"entsha ye-Technology Patent" i-Wireless Fall Monitor ingasuswa esitokisini sezakhamuzi (i-alamu yebhedi engenamandla). Ukuqapha kungabuye kubekwe ngaphezu kwesitulo okunciphisa umsindo we-alamu eduze nenhloko yabakhamuzi kanye ne-TamperProofs umqapha ukuze lowo ohlalayo akakwazi ukuwusetha kabusha. Ukuqapha kungabuye kufakwe emgodini okwehlisa umsindo we-alamu ekamelweni. Kuphephile ngoba abahlinzeki baziswa ngokukhanya okukhanyayo okukhanyayo kanye ne-alamu esheshayo emgodini obazisa lapho ohlala khona ekhuphuka.
Izici zokuphepha eziphephile
Lona ubuchwepheshe bethu obunamalungelo obunikazi obunamalungelo obunikazi obuwela phansi okuqapha ukuvimbela izici zokuphepha ezinamalungelo obunikazi ovumela umnakekeli ukuba azi ukuthi isignali ilahlekile noma isilondolozi sokuwa okungenantambo singekho ebangeni. Kungabuye kukhishwe ngaphandle kwegumbi lesiguli ngesisombululo esiqinile!
Azikho izintambo eziphakathi kwamapayipi nomqapha ongenawa Wireless
I-Cord yamahhala yokuvimbela ukuwa kwezintambo zokuvimbela ukuwa kanye nezinzwa zemisindo kusiza ekunciphiseni ukungena kwezingcingo kanye nezingozi zokuqeda. I-cord free sensor pad ibeka ngaphansi komhlali. Uma ohlalayo evuka futhi ingcindezi isuswa pad, isignali engenawaya ithunyelwa ku-alamu yokuqapha emgodini, ixwayisa umnakekeli.
I-TL-2100G Insimbi Yokungaxhunyiwe Engenantambo ibonisa njalo ukuthi isignali yamukelwa ku-pad sensor futhi uhlelo lusebenza kahle. Uma isibonakaliso se-sensor siphukile noma singekho ebangeni, qapha i-alamu bese ibonisa isignali ilahlekile.
Isebenza ngezinsimbi ezimbili ngesikhathi esisodwa
Sebenzisa umshini wokuwazisa ongenazintambo ongaxhunyiwe ongenawo umbhede nge-bed sensor pad; isikhwama senzwa yesinevili; umshini wokucindezela ophansi; ukuwa kwezintambo noma inzwa yokuhamba.
Ukuqapha kungasebenza ngezakhi ezimbili ngesikhathi esisodwa uma uthanda.
I-QUIETER - Ivolumu eguquguqukayo ngokuphelele.
Azikho izintambo eziphakathi kwamapayipi nabaqaphi - kunciphisa izingozi zokuqeda futhi kuqedile izintambo eziphahliwe noma ezidibeneyo.
Isaziso esilahlekile se-Pad Signal esilahlekile - isaziso somnakekeli uma uxhumano phakathi kwepenetha yesikhwama nomqapha likhishwa.
Ukusetha okukhethwa kukho: Umnakekeli onesihluthulelo angasetha kabusha isilonda nge-Patented, Caregiver Key ™ okuyinto i-Tamperproofs iqapha.
Ayikho inkinobho yokuphepha engavumelekile: Umnakekeli akakwazi ukukhohlwa ukuvula umlenze
Hlela kabusha kabusha uma ukucindezelwa kuphinde kusetshenziswe kudatha.
I-Visual Status Status ephakanyisiwe evumela ukuthi umnakekeli abone i-alamu ibanga.
Ibhethri eqhutshwa (i-3-AA engefakiwe) noma i-adapter ye-AC ozikhethelayo (AC-05).
Isaziso seBettery esincane.
Ukuqapha isaziso esingasebenzisi.
Amakhono okushayela umhlengikazi - I-Plugs ohlelweni lwekholi olukhona.
Amathoni amaningi we-alamu.
Isebenza ngebhedi engenazintambo noma izihlalo zesikhumba, izinsiza ezingenazintambo, ne-Infrared Motion Sensor PIR-01.
Ukubuka okuphelele kwe-3971 Ukubuka kwe-1 Namuhla